Ogaden News Agency (ONA) – Dhabar-adeega ANC (1912 – 2012) waa mid ku dayasho mudan
Dhabar-adeega ANC (1912 – 2012) waa mid ku dayasho mudan
Posted by Dayr	/ January 11, 2012
Waxaa isugu yimid tuulada Mangaung ee duleedka magalo madaxda Free State ee Bloemfontien dhamaan taageerayasha iyo madaxda ANC iyo in kabadan 46 madaxweyne oo kakala socoday qaradaha aduunka.
Waxaa kale oo iyaguna mesha lagu casuumay dad farabadan oo ka kooban aqoonyahano, siyaasiyin iyo haaya’do oo kor u dhaafay 100,000, say u dhagaystaan khudbadii ugu dheereed abid uu jeediyo madaxwayne Zuma (ANC) ah.
Dabaaldaga 100-guurada ANC waxaa lagu bilaabay 100 daqiiqo oo sheeko halgamed ah iyo taariikhdii ururka. Ciyaarihii hidaha ka dibna waxaa la jaray doolshe qaab mucjiso ah loo sameeyay waxaana ku xigay bulla-leedh (laser) samada lagu xardhay ood modaysay inuu cirkii gabi ahaanba isu badalay magaalo caasimad ah oo joogta saqdhexe, iyadoo laydhka magaalada quruxda ku caanbaxday ee bloemfontien markale lagu kordhiyay sharaxaad nooc walba leh oo qariyay jidadka waa wayen iyo goba kale ee magaaladaba. Markii la soo gaadhay 12kii habeenimo ayaa waxaa la soo dhaweeyay Tabo Mbeki madaxwaynihii hore suu u daaro toosh nuurkiisa iyo samayskiisaba loo ekaysiiyay calanka iyo calaamada ANC.
Kaniisad yar oo duug ah oo ku taala tuulada Mangaung ayaa ahayd meshii lagu aasaasay urur yar oo ay lahaayeen dad aad loo xaqiro waagaa oo tabar dhaqaale iyo mid ciidan toona aan lahayn. Kaniisadaa ayaa nasiib u yeelatay inay noqoto meeshii ugu caan sanayd wadanka iyadoo qaadatay magaca meeshii lagu askumay urur halgameedkii ugu cimriga dheeraa ee ka guulaystay xukunkii ugu cabudhiska badnaa caalamka.
Madax wayne Zuma wuxuu ka jeediyay goobtii khudbadii ugu dheereayd iydoo oo ka koobnayd 60 bog. Wuxuu khudbadaa xoogeda kaga hadlay taariikhdii 100sano ee ANC iyo madaxdii ururka. Wuxuu u mahad celiyay 121 ruux oo badidood ahaa kuwii naftooda u huray halganka. Wuxuu sheegay magaca Nelson Mandela 14 jeer. Dawladii midabtakoorkana wuxuu canaantay 21 jeer, halgankii ANC-na wuxuu amaanay 21 jeer. Wuxuu tiriyay magacyadii ragii ay halganka ku soo wada jireen ee ku naf waayay iyo kuwo ka sii horeeyay oo iyagana u dhintay halganka dartiis.
Layaab kuma uuna lahayn saaxiibkay oo ila fadhiyay rugta dhagaysiga khudbada inuu ilmeeyo markii uu Zuma yidhi; “inkasta oon madaxwayna ahay dalkiina xoryahay, hadana qasriga wayn een daganahay marna igama tirin igamana bogsiinin xanuunka ay igu hayso xusuusta qubuurihii saaxiibadaydii halganka een nasiibku tusin ANC oo 100 jirsatay”.
Dabcan aniga iyo saaxibkayba waxaanu xusuusanay qubuuro dad aanu jeclayn oo sheekada Zumana ay u ekayd mid anaga naga hadlaysa. Inkasta oo aniga iyo saaxiibkay anaan rajanaynin inaanu madax ka noqono Ogadenia markay xorowdo oo ay ku jiraan halgankeena halyeeyo Zuma oo kale ah, hadana waxay sheekadan Zuma ee qaadatay laba saacadood iyo badhka na xasuusisay in ay dhabtahay maah-maahdii ahayd da-daalaa wuu helaa, waqti dheeraadana in uuna ahayn mid mooraal jabiya halgamaaga, balse uu yahay kayd taariikheed oo kororsiimo horseeda.
Ka soo qayb galaasha aduun-weynaha ka socday waxaa kamid ahaa madax ka timid Bariga Africa; Burundi, Rwanda, Uganda, Erteria iyo kuwa kale oo iyagu aad uga badalaa madaxda aduunka intiisa kale ka timid. Muzavane -ga Yugaandha ayaa dadka dhagaystaayasha ah ka yaabiyay markuu yidhi; “Waxaan moodayay dadka madaw oo dhan inay yihiin Zulu”. Muzevane malaha wuxuu rabay inuu ku amaano Zuma oo qoomiyadaas ah, ama wuxuuba rabay inuu ku canbaareeyo oo dadka kale tuso Zuma sida uu had iyo jeer uu dhaqanka Zulu-ga ugu muujiyo kulamada waawayn ee dawliga ah inkastoo uu matalo 11 qowmiyadood oo Zulu-guna qayb uun kayahay. Sikastaba waxay cadaynaysay sida uuna ula haysanin taariikhda wadankan iyo xasaasiyada kala badalaanta dhaqanka iyo midabka ee wadankani uu soo maray.
Sidoo kale xusid mudan sida ay madaxdii Bariga Africa ka socotay ula yaabeen dhacdooyin kale oo lagaga soo horjeedo Madaxwayne Zuma laftiisa iyo kuwa kale oo ANC (xisbiga talada haya) lagaga soo horjeedo, iyadoo Bariga Africa siyaasada dulqaadka ku dhisan ayna ka jirin ayay madaxdani daawanayeen gudoomiyaha ururka dhalinyarada ANC oo banaanbax wayn ku qabtay isla tuuladan taariikhiga ah oy waliba kaga soo horjeedaan M/W Zuma kagana dalbanayaan inuu xilka ka dago iyadoo boolisku ay ilaalinayaan si la mid ah siday u ilaalinayaan Zuma.
Waxaa kale oo dabcan iyadana ku cusbayd madaxdii Bariga Africa ka timid arinkale oo ahayd DA (ururka matala cadaankii madawga adoonsan jiray) oo munasabad wayn ku qabtay isla magaalada isla wakhtigaas ay ANC dabaaldagayso iyagoo xus iyo duco u qabtay dadkii cadaanka ahaa ee ANC laysay 80tamadkii markay xornimada u dagaalamayeen, balse ayna cid qudhihi danaynin hawshoodana ay isaga wateen sida ANC isaga wadato teeda. Malahayga kama saari karo in madaxdaas hamuumyo ka haysay inay laayaan dadkaas inka badan inta ay hilaw u qabaan inay ka bartaan dulqaadka siyaasadeed iyo masuuliyad. Waxaa iyada xasuusin mudan in lagu marti qaaday dhiig yacab Zanawi laaakiin uusan imaanin isagoo ka cabsaday jaaliyada JOKA iyo shacabka Ogadeniya oo u sii diyaargaroobay inay ku fadeexadeeyaan munaasabadaa oo mudaharaad ay ooda kaga qaaadaan sidii ku dhacday shirkii G20 ee London lagu qabtay.
Qaybta 2aad ayaad kaga bogan doontaan caqabadihii soo maray ururk ANC iyo madaxdii ururka 100kaa sano. La soco.
OMAR JIGJIGA – ONA/SA